Somaliska - Huddinge
Ku soo dhawoow maktabka oo Huddinge!
Haddii aad dooneysid inaa maktabka oo Huddinge wax ka deynsatid waxaa u baahantahay kaarka maktabka iyo lambar sir. Kaarka waa bilaash iyo waxaa ku isticmaalikarta dhammaan lixda maktab aan anaga mas’uulka ka nahay. Markas waxaa adiga deynsankarta buug, filimyo, joornaalo, CD iyo buugta digitaalka[e-böcker]. Att låna på biblioteket är gratis.
Haddii aad dooneysid inaa heshid kaarka maktabka waxaa qasab ah in adiga koow iska diwaangalisid goobteena. Adiga waxaa soo buuxinkarta foomka bogga internetka ka heleysid ama maktabyadeena midkood imaaw. Kaarka aqoonsiga horey usoo qaado marka aad soo dooneysid kaarka maktabka.
Buug iyo joornaalo oo luqado kala duwan ku qoran
Maktabyada oo Huddinge adiga waxaa ka heli buug iyo joornaalo oo luqado farah badan ku kala qoran. Bogga internetkeena adiga waxaa ka heli joornaalo digitaal oo aduunka oo dhan ka soo baxo waxaa suurtagalin adeega Pressreader.
Haddii aad dooneysid inaa iswiidhishka ku tababaratid waxaad heli buug ku qoran luqada iswiidhshka oo la fududeeyay iyo koorsooyin luqadeed. Fadlan na weeydii, shaqaalaha weey ku caawin sidaa u heshid waxaa aad raadineysid.
Kombiyuutar iyo qadka internetka
Dhammaan maktabyadeena waxaa ka heli kombiyuutar iyo qad internet oo adiga isticmaalikartid haddii aad haysatid kaarka maktabka.
Deynso iyo sii ballanso
Ilaa intee baa aniga deynsankara?
Caadiyan qofka wuxuu deynsankara afar isbuuc laakin inta aan ka eheen xaaladaha qaaska. Tusaale ahaan filimyada qaarkood iyo buugta aadka loo xiiseen wakhti gaaban baa la deynsan. Marka aad deynsatid adiga waxaa lagu siin warqad caddeyn oo adiga ka arkeysid taariikhda la dooni inaa soo celisid.
Maxaa dhici haddii xilliga soo celinta ka soo dib dhaco?
Markas waa qasab adiga inaa bixisid qarashka la soo habsaamida. Inta aad bixineysid waxey ku xirantahay waxa aad deynsatay iyo inta maalmood aad la soo habsaamtay.
Sidee suubin marka aan dib u deynsan?
Adiga dib waa u deynsankarta oo waxaa gali bogga internetkeena oo isticmaali kaarkaada maktabka iyo lambarka sirta ama waxaa soo wici maktabyadeena midkood. Waxyaalaha inta ugu badan waxaa dib u deynsankarta labo jeer, laakin inta aan ka eheen xaalado qaas. Tusaale ahaan dib ma u deynsankartid filimyo ama buug dadkale saf ugu yaran ey sugaayaan.
Aniga saf ma u galikara buug la deynsaday?
Haa, waa suurtagal. Maktabyada oo Huddinge waa bilaash in buug ama dhowr buug saf loo galo.
Aniga ma ka dalbankara buug maktab oo Huddinge ka mid eheen?
Haa, waa suurtagal. Haddii aad dooneysid inaa buug ka dalbatid maktab aan kamid eheen degmada Huddinge waxaa bixin qarash dhan 10 karoon.
Xeerar kale oo deynsashada oo adiga u baahanatahay inaa aqoon u leedahay:
Haddii adiga ka yartay 18 sano waa in waalidka mas’uulka saxiixan oo markas kadib baa heli kaarka maktabka.
Adiga baa mas’uul ka ah dhammaan wixii lagu deynsado kaarkaada maktabka.
Waalidka baa mas’uul ka ah wixii carruurtooda deynsadan.
Waxaa dib ugu soo celinkarta dhammaan maktabyadeena kan aad dooneysid.
Adiga baa mas’uul ka ah in deynta wakhtigii loogu talagalay ku soo celisid.
Haddii buug la soo habsaamtid waa qasab inaa adiga bixisid qarash.
Carruurta ka yar 18 sano ma bixinaayaan wax qarash.
Haddii aad soo celin weeysid buug maktabka wuxuu kuu soo dirsan warqada qarashka lagu bixiyo oo buugas.
Haddii aad dib usoo celisid deynta aad la soo habsaamtay ma u baahnid inaa bixisid qarash. Laakin waa inaa bixisid qarashka la soo habsaamida.
Haddii buug dhaawacmo intaa adiga deyn ahaan u haysatid waa qasab inaa adiga magdhabtid.
Haddii buug aad weeysay qarashkiisa bixisid oo markas kadib heshid suurtagal ma ahan in lacagtaadii dib laguugu soo celiyo.
Haddii qarashka deynta lagugu leeyahay ey ka badantahay 100 karoon adiga ma deynsankartid ama saf ma galikartid buug. Marka aad lacagta bixisid bey suurtagal noqon inaa deynsatid iyo saf u gashid buug.